17 Fambara mampalahelo fa tsy tia anao intsony izy: ahoana no fomba hitenenana azo antoka - Fifandraisana
17 Famantarana mampalahelo tsy tiany intsony ianao: eo amboninao ve ny sipanao?
Nahazo fahatsapana ratsy momba an'io ianao. Tsy nitovy ny sipanao vao haingana, ary manomboka mieritreritra ianao fa tsy tia anao intsony.
Ary dia rovitra ianao.
Rovitra eo anelanelan'ny faniriana hahafantatra raha niova ny fahatsapany, ary mametraka ny lohanao ao anaty fasika fotsiny, manantena fa raha tsy miatrika ny toe-javatra ianao dia hiverina amin'ny fomba fanaony taloha ihany.
Rehefa dinihina tokoa, fantatrao izany raha tsapanao fa tsy tia anao izy dia mila manao zavatra momba izany ianao.
Na dia eo aza ny toe-javatra mamono dia midika fa misy olona manapa-kevitra ny hijanona amin'ny fifandraisana tsy misy fitiavana, raha tsy nahazo namatotra anao tamin'ity lehilahy ity ianao fa ny fitiavanao azy dia mety ho tonga ny fotoana handehanana.
Saingy alohan'ny handehanantsika mialoha ny tenantsika, ny dingana voalohany dia ny mamantatra raha tena niova ny fihetseham-pony, na raha toa ka lasa zavatra hafa ny fihetsiny.
Mety hahomby amin'ny famakiana mafy izany raha mbola tia azy ianao, fa raha tsy tia anao izy dia vao maika afaka miatrika izany ianao dia vao mainka tsara kokoa.
Ireto ny famantarana lehibe tsy itiavan'ny olon-tianao anao intsony.
1. Tsy liana amin'ny fiainanao izy.
Liana tamin'ny andronao izy taloha. Ny asanao. Ny namanao. Ny fianakavianao. Ny hetahetanao sy ny nofinao.
Afaka miresaka mandritra ny ora maro ianao taloha ary mbola mila miresaka bebe kokoa.
Saingy tato ho ato dia toa tsy te hahalala fotsiny izy.
Tsy mametraka fanontaniana aminao izy, ary rehefa manelingelina azy ny manontany hoe nanao ahoana ny andronao dia tsy dia mihaino izy ary saika hadinony foana izay lazainao azy.
Rehefa mandray ny andraikitra voalohany ianao ary manomboka milaza aminy ny zava-nitranga tamin'ny namanao akaiky indrindra na izay nolazain'ny mpiara-miasa aminao tao amin'ny birao androany, dia ho hitanao eo imasony fotsiny fa tsy miraharaha izy ary tsy hitany fa mahaliana ny fiainanao intsony.
2. Mandany fotoana faran'izay kely araka izay azo atao aminao izy.
Raha tsy tia anao toa ny taloha izy dia tsy hanao ezaka handany fotoana miaraka aminao izy.
Hiasa foana izy, na miaraka amin'ny namany, na ny fianakaviany, ary tsy hanandrana hampiditra anao amin'ny fiainam-piaraha-monina izy.
Raha miara-mipetraka ianao dia mety ho ao an-trano izy fa amin'ny tontolony manokana.
Ny fanananao ny toerana misy anao dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana rehetra, fa raha mifikitra tsy tapaka amin'ny asany izy, andian-tsarimihetsika, na lalao, ary ianareo roa dia tsy miara-misakafo akory na miara-miala sasatra amin'ny takariva toy ny fanaonareo taloha. misy zavatra mandeha tokoa.
3. Tsy ataony loha laharana ianao.
Rehefa tia anao ny lehilahy dia fantatrao izany satria ianao dia ampahany lehibe amin'ny tontolony. Mety hanana fiainana be atao sy fanoloran-tena hafa izy, saingy mbola hataony loha laharana ihany amin'ny lafiny sasany.
Raha tsapanao fa ianao dia eo amin'ny farany ambany amin'ny lisitry ny laharam-pahamehana aorian'ny asany, ny namany, ny fianakaviany, ny fialam-boly ary angamba ny alikany aza, dia tsy tokony ho araka ny tokony ho izy ny fahatsapany ho anao.
4. Manao drafitra tsy mampiditra anao izy.
Mazava ho azy fa tena zava-dehibe ho an'ny mpivady ny samy manana ny tombotsoany sy ny namany fa tsy avelao fotsiny ny fifandraisana.
Fa izao dia entiny any amin'ny ambaratonga manaraka izany. Manao drafitra miaraka amin'ny namany sy ny fianakaviany foana ianao izay tsy anisany mihitsy.
Mihazona ny tenany foana izy amin'ny hariva sy amin'ny faran'ny herinandro ka tsy mila eo akaikinao izy ary mieritreritra na miatrika ny tsy fitiavany anao.
5. Tsy manomboka fifandraisana izy.
Amin'ny fitiavana voalohany, ny ankamaroan'ny mpivady dia mifampiresaka 24/7. Raha tsy mifanerasera izy ireo dia mifandray amin'ny nomerika.
Ary ara-dalàna izany raha milamina kely rehefa mandroso ny fifandraisana ary miala sasatra ao ianareo roa ary azo antoka kokoa ny fahatsapana ny hafa.
Fa rehefa miala sasatra be izy dia mety ho famantarana ratsy.
Raha hitanao fa ianao foana no manara-maso, mandefa hafatra mandritra ny andro, ary manome soso-kevitra an-telefaona rehefa misaraka ianao, dia mety hisy zavatra tsy mety.
6. Tsy tia olona izy.
Ny sipanao dia tsy tia anao ara-batana intsony.
Angamba tsy mba nampihetsi-po manokana mihitsy izy, na angamba nifampikasokasoka taminao tao am-pandriana isak'alina, fa na izany na tsy izany dia tsy dia tia olona mihintsy izy.
Ary tsy mamaly tsara izy raha manandrana mampiseho fitiavana azy koa ianao, manetsiketsika anao, mikatso, na miteny aminao mivantana fa aleony tsy nanao ianao.
Mety misy antony hafa mahatonga ny tovolahy tsy hiaraka aminao intsony, indrindra raha sorena izy ireo na mandalo fotoan-tsarotra, fa ny fanovana toa izao dia fampitandremana azo antoka fa misy tsy mety.
7. Tsy liana amin'ny firaisana izy.
Na toy inona na toy ahoana ny fiainam-piraisana taloha dia tsy fantatra intsony izao. Toa tsy liana intsony amin'ny fanaovana firaisana aminao intsony izy.
Ny firaisana dia fihetsika akaiky tsy mampino, ary raha tsy tia anao intsony izy nefa tsy nifandray tamin'io dia mety hanahy izy sao hanary azy tanteraka ny karazana firaiketam-po.
Angamba izy mamaly raha manomboka zavatra ianao, saingy angamba mekanika tsara sy mitokana.
Saingy mety manao fialantsiny izy ary mahita fomba hialana amin'izany raha ataonao mazava fa te hampiditra azy eo am-pandriana ianao.
Ary angamba sahirana ianao amin'ny fanombohana zavatra na izany aza, amin'ny fahalalana fa misy zavatra tsy mety eo aminao.
8. Tsy mahatsikaritra ny fisehoanao izy.
Tiany io taloha rehefa niakanjo hariva ianao na nilaza taminao rehefa namiratra ianao.
Fa ankehitriny, toa tsy hitany mihitsy. Mahatsapa ianao fa afaka manaratra ny lohanao ary tsy hanome hevitra momba izany akory izy.
9. Tsy mba manana fotoana kalitao miaraka ianareo.
Raha toa ka hizotra ny fifandraisana iray, dia mila miezaka ianareo roa, ary tafiditra amin'izany ny fanokanana andro na ora na fotoana ifantohanareo manokana, tsy misy fanelingelenana.
Mety ho vonona ny hijery sarimihetsika miaraka aminao ianao, satria tsy mila miresaka ianao, saingy mazava fa manandrana misoroka ny tsy hipetrahany mifanatrika aminao amin'ny trano fisakafoanana izy ary tena misy resaka marina.
10. Mitsoka mafana sy mangatsiaka izy.
Raha tsapany fa tsy tia anao intsony izy na manandrana miady amin'izany zava-misy izany dia mety mitaingina rollercoaster kely izy, ary ho eo am-pamaranana izany ianao.
Hifandona eo anelanelan'ny fahatsapana izy fa mbola tia anao izy ary mahatsapa fa misy zavatra tsy ampy. Rehefa mahatsapa ny teo aloha izy dia mety ho be fitiavana sy ho tia anao tsy ho manga.
Ary avy eo rehefa tsapany ity farany, dia hivadika ho anao tampoka izy, na hanomboka hamely anao noho ny fahasosorana tsapany.
Ho azonao atao ny milaza azy amin'ny lohan'ny loha ratsy.
Mazava ho azy, ny fitsofana ny mafana sy ny hatsiaka dia mety hidika koa fa miatrika olana hafa izy, fa raha miaraka amina zavatra hafa amin'ity lisitra ity dia tsy mandeha tsara izany.
11. Mahasosotra anao foana izy.
Tsy afaka manao zavatra mety intsony izao. Mahazo sosotra foana izy amin'ny zavatra bitika indrindra, ary ny quirks izay tiany taloha momba anao dia toa lasa mikofoka fotsiny.
Ary, tsy misahirana manafina ny fahasosorany izy. Manao teny mandratra sy manipy foana ianao izay manapaka anao lalina. Afaka nanao an'izany fotsiny izy raha tsy tia anao intsony.
12. Hiresaka anao eo imason'ny hafa izy.
Tsy ataony mitokana ireny fanamarihana ireny. Faly koa izy mitsikera anao sy ny toetranao na manao ‘sangisangy’ eo imason'ny olona hafa, mandondona ny fahatokisanao tena.
13. Tsy vonona ny handeha lavitra ho anao izy.
Raha vao nifankatia ianao dia hanao zavatra be dia be mba hahasambatra anao. Handrasana mialoha ny zavatra ilainao izy, ary raha nangataka azy hanao soa ianao dia aleony vonona kokoa.
Fa ankehitriny, tsy afaka ny ho mazoto kokoa izy. Ataony toy ny hoe mangataka aminy an'izao tontolo izao ianao rehefa mangataka kely indrindra ianao, ary afaka mamoaka fialan-tsiny hatrany izy hoe maninona izy no tsy afaka manampy na tsy hanampy.
14. Tsy hanaiky lembenana izy.
Rehefa tia olona iray ianao dia takatrao fa samy manana ny tadiaviny sy ny zavatra ilainy ianao ary manao fiezahana mitady vahaolana afovoany.
Fa tsy hanao an'izany intsony izy. Mihabetsaka, ny fomban'ny sipanao na ny lalambe.
15. Tsy miresaka ny ho avy izy.
Ny andro nantenanareo roa dia ny hoe aiza no mety hipetrahanareo, ny ankizy mety hanananareo, na ny fialamboly mety hataonareo.
Izy izao dia mahavita mamily ny resaka rehetra momba ny ho avy, na ny akaiky na ny lavitra, satria tsy mino fotsiny izy fa hisy intsony.
16. Tsy te hiasa amin'ny zavatra izy.
Angamba ianao efa nanandrana niresaka taminy momba ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahanareo.
Raha mbola tia anao izy, ny valiny amin'ny ahiahinao dia tokony hanazava ny antony nahatonga ny fihetsiny ary hiresaka ny fomba ahafahanareo roa mandamina izany.
zavatra mahafinaritra hatao amin'ny fitsingerenan'ny taonan'ny sakaiza
Fa raha miala fotsiny izy ary mandà tsy hiditra na hiresaka ny olanao, dia famantarana mazava tsara izany fa tsy tia anao intsony izy.
17. Ny tsinainao dia milaza aminao zavatra tsy mety.
Eny ary, ka ny vavonintsika dia tsy milaza amintsika ny marina foana, ary afaka manomboka manahy isika indraindray fa misy olona tsy tia antsika intsony noho ny fiheverantsika tena ambany fotsiny.
Raha manana fotoana tsy mety izy any am-piasana na miaraka amin'ny fianakaviany, dia mety hahatonga azy ho variana sy lavitra anao izany, na dia tsy misy ifandraisany aminao aza izany.
Fa raha lalina ny fonao dia misy zavatra milaza aminao fa tsy tia anao izy, dia esory izany fahatsapana izany ary jereo hoe avy aiza io.
Raha paranoia fotsiny ny anao dia zavatra mila iasanao izany.
Raha resy lahatra ianao fa zavatra hafa kokoa izany, matokia ny tsinainao ary eritrereto ny dingana manaraka.
Mbola tsy azonao antoka raha tia anao ny sakaizanao na tsia? Te hanana torohevitra vitsivitsy raha tsy manao izany izy? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
15 manasonia ny sakaizanao te hisaraka aminao: Ahoana no hilazana raha azo antoka
Torohevitra 13 hahatonga azy malahelo anao ho lasa adala (Tena mandeha io!)
Famantarana tsara 10 izay mbola itiavanao azy ireo: ahoana no hahalalana tsara
Ahoana ny fomba hampitsaharana ny fifikirana amin'ny fifandraisana
vola amin'ny naoty banky
izay tokony hatao rehefa leo faran'izay ianao any an-trano
ahoana ny fomba fanaovam-beloma ny narcissist
miezaka ny manao ny fiainako hiaraka